Otu esi etinye Python 3.8 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 6, 2021 September 11, 2021 by Jọshụa James
Site na ndabara, Debian 11 Bullseye anaghị eso Python 3.8 na ebe nchekwa ya, n'adịghị ka nkesa ndị ọzọ dị ka Ubuntu. Python 3.9 bụ ugbu a ọhụrụ kwụsiri ike atụmatụ ntọhapụ usoro nke Python 3, ya na Python 3.10 ka nọ na beta.
Iji mee ụfọdụ ngwa ma ọ bụ frameworks na Debian 11, ị nwere ike ịwụnye Python 3.8 na sistemụ gị, dịka ọmụmaatụ, iji usoro mmemme Swift nyere ya iji jiri ụdị Ubuntu LTS nke ka na-agba ọsọ ụdị Python ochie na ndabara. A na-arụ ọrụ Python 3.8 ugbu a maka mwepụta nchekwa, mana ọ dị mma ịkwalite na ụdị ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị na-emepe ngwa.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi ebudata Python 3.8 kachasị ọhụrụ, chịkọta ma mee ya na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị.
Ozugbo ị nwetara download njikọ, jiri wget iwu ka ibudata Python 3.8 Archive:
Mara, awụla nke a, ma ọ bụ na ị ga-eche nsogbu ihu. Ị ga-achọkwa iji aha ndekọ aha na ụdị gị dochie ụzọ ahụ.
Python's venv modul bụ ebe a na-ahụ anya bụ ebe Python dị ka onye ntụgharị Python, ọba akwụkwọ, na script etinyere n'ime ya dịpụrụ adịpụ site na ndị e hibere na mpaghara ndị ọzọ mebere, na (na ndabara) ọba akwụkwọ ọ bụla arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị, dịka ọmụmaatụ, ndị etinyere na sistemụ arụmọrụ Ubuntu gị ka ịzenarị ọgụ na ịkpaghasị gburugburu ebe nrụpụta gị.
Iji jide n'aka na etinyere Python 3.8 nke ọma ma na-arụ ọrụ, mepụta ọrụ Python ngwa ngwa dị ka ndị a.
Site na ndabara, a ga-etinye PIP 3.8. Maka ndị nwere nsogbu PIP, ụzọ ọzọ bụ iji aka tinye njikwa ngwugwu.
Enwere ike ime nke a n'ụzọ dị iche iche. Otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị bụ ndị a.
Banye na gburugburu gị, wee budata nweta-pip.py jiri ya iwu wget.
Ọzọ, wụnye faịlụ ebudatara.
Ozugbo arụnyere, ọ dị mma ịlele maka nkwalite.
Ugbu a nyochaa ụdị PIP 3.8 arụnyere:
Ị mụtala otu esi etinye Python 3.8 maka Debian 11 Bullseye na nkuzi wee mepụta gburugburu mebere ozugbo. N'ozuzu, a na-adụ ọdụ ma ọ bụrụ na ị nọ na mmepe ịkwaga Python 3.9 n'ọdịnihu, mana iji Python 3.8 ka dị nchebe dịka Ntọala Software Python na-edobe ya.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Python Mail igodo
Otu esi etinye Fail2ban na Firewalld na AlmaLinux 8
October 6, 2021 6: 57 am
Ndewo ebe ahụ, Daalụ maka nkọwa zuru ezu maka otu esi etinye Python3.8.12 site na faịlụ tar. Yabụ ugbu a na anyị enweghị pip dị na Python arụnyere dị ka nke a kedu ka m ga-esi wụnye ngwugwu Python ọ bụla dịka ọmụmaatụ apache-airflow na gburugburu ebe a mebere? Ọ nwere ihe dị mfe iji mee nke a? A na-ekele ndụmọdụ ọ bụla. Daalụ
October 6, 2021 9: 06 am
Emelitere ntuziaka a, nwalekwara ya site na ịwụnye apache-airflow nke rụrụ ọrụ. Echere na ọ na-enyere aka ntakịrị.
Nsonaazụ sitere na wụnye:
arụnyere nke ọma Babel-2.9.1 Flask-Babel-1.0.0 Flask-JWT-Extended-3.25.1 Flask-OpenID-1.3.0 Flask-SQLAlchemy-2.5.1 Mako-1.1.5 WTForms-2.3.3 alembic-1.7.3 .3.3.2 anyio-2.1.4 apache-airflow-2.0.1 apache-airflow-providers-ftp-2.0.1 apache-airflow-providers-http-2.0.1 apache-airflow-providers-imap-2.0.1 apache-airflow -ndị na-enye-sqlite-3.3.2 apispec-1.12.3 argcomplete-20.3.0 attrs-1.4 blinker-1.5.0 cattrs-2021.5.30 certifi-1.14.6 cffi-2.0.6 charset-normalizer click-7.1.2 20.10.2 pịa-0.4.4 colorama-5.0.1 colorlog-0.9.1 commonmark-1.0.15 croniter-35.0.0 cryptography-0.7.1 defusedxml-0.3.4 dill-2.1.0 dnspython-0.16 docut- 1.1.3 email-validator-1.1.4 flask-3.3.3 flask-appbuilder-1.10.1 flask-caching-0.4.1 flask-login-0.14.3 flask-wtf-0.17 graphviz-20.1.0 gunicorn-11 h0.12.0 -0.13.7 httpcore-0.19.0 httpx-3.2 idna-4.8.1 importlib-metadata-1.5.0 importlib-akụrụngwa-0.5.1 inflection-8601 iso0.1.16-0.6.0 mwepu-1.1.0 dị ize ndụ-2. 2.11.3 jinja3.2.0-1.6.0 jsonschema-0.12.2 lazy-object-proxy-3.3.4 l ockfile-1.1.1 markdown-3.13.0 markupsafe-1.5.1 marshmallow-3.0.1 marshmallow-enum-0.23.1 marshmallow-oneofschema-1.21.2 marshmallow-sqlalchemy-0.1.5 numpy-0.3.1 opena validator-1.3.3 openapi-spec-validator-2.1.2 pandas-0.2.1 pendulum-5.8.0 mkpọrọ-2.20 psutil-2.10.0 pycparser-1.7.1 pygments-0.18.0 pyjwt-2.3.0 pyrsistent-2.8.2 .3 Python-daemon-0.15.0 python-dateutil-4.0.1 Python-nvd3-3.2.0 Python-slugify-2021.3 python2020.1-openid-5.4.1 pytz-2.26.0 pytzdata-3986 pytzdata-1.5.0slugify 10.11.0 rfc1.2.2-1.16.0 ọgaranya-1.2.0 setproctitle-1.3.24 isii-1.0.0 sniffio-0.37.8 sqlalchemy-0.0.9 sqlalchemy-jsonfield-0.8.9 sqlalchemy-utils-6.2.0.u -bundle-1.1.0 tabulate-1.3 tenacity-0.14.1 termcolor-3 text-unidecode-1.26.7 unicodecsv-1.0.1 urllib3.6.0-XNUMX werkzeug-XNUMX zipp-XNUMX
November 11, 2021 6: 54 am
Otu esi eme nke a bara ezigbo uru mgbe ngwa obibi akwụkwọ 3D cura jụrụ iji Python 3.9 wuo wee kwusie ike na ụdị 3.8 python. Ọ bụ ezie na m maara otu usoro ahụ, ọ gaara ewe m oge iji dozie ha. Daalụ maka nchịkọta a. Ọ rụrụ ọrụ na-enweghị ntụpọ na igwe bullseye m.
November 11, 2021 3: 10 elekere
Daalụ maka ozi ahụ, obi dị m ụtọ na ọ rụpụtara ya.
November 18, 2021 12: 30 am
Daalụ, nke a baara oke uru.
Enwere m ike ịwụnye Svp4Linux na Svptube na Debian 11 ọhụrụ, n'ihi na ọ dabere kpọmkwem na libpython3.8… nwere ike ịba uru maka ọnọdụ ndị ọzọ, ọmarịcha!
November 18, 2021 6: 09 am
Ndewo Richard, daalụ maka ozi ahụ.
Obi dị m ụtọ na nkuzi ahụ nyeere gị aka.